Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Fitsangatsanganana virijina ankehitriny handeha ho any Nassau sy Bimini
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fitsangatsanganana virijina any The Bahamas
Miakatra ny vaksiny ary miakatra manerantany ny fameperana ny dia, hiverina an-tsambo any amin'ny morontsirak'i Karaiba ny sambo fitsangantsanganana. Ny Virgin Voyages 'Scarlet Lady, fitsangantsanganana an-tsambo vaovao, dia nanomboka ny fotoam-pitaterana an-tsambo ho any Karaiba, nanao ny laharam-pahamehana tao The Bahamas tamin'ny «Fire and Sunset Soirées» efa-alina, anisan'izany ny fijanonana tao amin'ny The Beach Club at Bimini. Ny herinandro lasa teo dia notontosaina tao an-drenivohitra sy tao Bimini ny lanonam-panokafana, toerana nandraisan'ny praiminisitra lefitra sy ny minisitry ny fizahantany, ny hajany ary ny seranam-piaramanidina Honorable I. Chester Cooper sy ny tale jeneraly Joy Jibrilu ny sambo fitsangantsanganana mankany amoron'ny nosy Bahamas.
Ny fitsangantsanganana isan-kerinandro dia hisy fiantraikany tsara amin'ny toekarena eo an-toerana.
Ny Lady Scarlet dia hanao dia an-tsambo any Bimini sy Nassau isan-kerinandro mandritra ny fito volana manaraka, manomboka amin'ny Oktobra 2021 ka hatramin'ny Mey 2022.
Ny tsipika fitsangantsanganana dia mila vaksiny feno ho an'ny vahiny sy ny mpiasa. Hotsapaina ho an'ny Covid-19 ihany koa ireo mpandeha alohan'ny hidirany, sarany voasaron'ny sambo fitsangantsanganana.
Nandritra ny lanonam-panokafana tany Bimini, ny praiminisitra lefitra Cooper dia naneho ny fahatsapany ho an'ny fitomboana ara-toekarena raha jerena ity fiaraha-miasa vaovao ity. "Ny fitsangantsanganana isan-kerinandro dia hisy fiantraikany tsara amin'ny toekarena eo an-toerana, ary ny mpitsidika fitsangantsanganana dia hiaina ny fifaliana rehetra amin'ny andro any amin'ny nosy tropikaly kely iray, manomboka amin'ny firoboroboana amoron-dranomasina fotsy mangatsiaka sy fotsy, hatramin'ny fitsangantsanganana izay mitondra azy ireo fanjonoana lalao lehibe, fisitrihana any anaty ranomasina, kayak, ary fifampikasohana amin'ny feso, "hoy ny praiminisitra lefitra Cooper.
Ny talen'ny jeneraly Joy Jibrilu dia nanako ny fihetseham-pon'ny praiminisitra lefitra Cooper tamin'ny lanonam-panokafana notontosaina tao Nassau, "Ny zotram-pivarotan-tseranana Voyages misy andro iray any Nassau ary iray andro any Bimini dia hahafahan'ny vahiny 2,700 XNUMX anao hahatsapa fanandramana Ny Bahamas tahaka azy ireo hijery ny sasany amin'ireo Bahamas'tranonkala sy toerana manintona voalohany ary mifanerasera amin'ny olona tia mandray olona. ”
Ny sambo fitsangantsanganana olon-dehibe ihany dia mahazaka mpandeha 2,770 24 (misy ekipazy) ary toerana fisakafoanana sy fisotroana XNUMX. Ity sambo ity koa dia ahitana toerana marobe amin'ny hetsika, trano filokana tsy misy setroka, arcade, ivon-toeran-tsakafo misy habaka roa sy maro hafa.
Ny Lady Scarlet dia hanao dia an-tsehatra isan-kerinandro any Bimini sy Nassau mandritra ny fito volana manaraka, manomboka ny volana Oktobra 2021 hatramin'ny Mey 2022. Ho fitandremana ireo kavina Covid-19 sy hiantohana ny fiarovana dia mitaky vaksiny feno ho an'ny vahiny sy ny mpiasa ny sambo fitsangantsanganana. Hotsapaina ho an'ny Covid-19 ihany koa ireo mpandeha alohan'ny hidirany, sarany voasaron'ny sambo fitsangantsanganana. Ny paikadim-pahasalamana eny an-tsambo dia misy ny fanadiovana, ny fanalavirana ara-batana, ny fibodoana voafetra ary ny fampiharana ny torolàlana ataon'ny governemanta eo an-toerana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsangantsanganana Virgin Voyages dia mitsidiha virvoyages.com.